बिना बनिन् महिला उम्मेदवारमध्ये सर्वाधिक दोब्बर मत प्राप्त गर्ने नेपालकै प्रथम महिला
२०७४ मङ्सिर २७ बुधबार
बेलौरी मंसिर २८ -
कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधी सभा सदस्यमा निर्वाचित बिना मगर देशभरका महिला उम्मेदवारमध्ये सर्वाधिक दोब्बर मतान्तरले विजयी भएकीले देश बिदेशहरुमा अहिले बिनामगर हाई हाई चलिरहेको छ । बिहीबार देशभरको मत गणना सम्पन्न अनुसार बिना मगरले सार्वाधिक दोब्बर मतान्तरले निर्वाचित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो। उनि महिला उम्मेदवारमध्ये सर्वाधिक दोब्बर मत प्राप्त गर्ने नेपालकै प्रथम महिला बनेको तथ्याङ्कले जनाएको छ । कञ्चनपुरकी छोरी बिना अहिले मतदाताहरुलाई धन्यवाद दिन घर दैलो अभियानमा व्यस्तछिन् ।
निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर १ प्रतिनिधी सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी बिनाको मतान्तर सर्वाधिक रहेको छ । उनले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी काँग्रेसका उम्मेदवार दिवान सिह विष्टलाई दोब्बर अर्थात १९ हजार २४८ मतान्तरले हराउदै निर्वाचित भएकी थिईन् । बिनाले ३८ हजार ४६७ र विष्टले १९ हजार २१९ मत प्राप्त गरेका थिए ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा ८८ हजार ५९ कुल मतदाता मध्ये ६३ हजार २९५ मत खसेका थिए । जसमध्ये ६० हजार २६३ मात्रै सदर भएका थिए । बिना सांसदको निर्वाचनकै ईतिहासमा कञ्चनपुर जिल्लाबाट निर्वाचन जित्ने पहिलो महिला हुन् । यस अघि विस २०७० सालमा सम्पन्न भएको दोस्रो संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा समेत बिनाले १ निर्वाचन क्षेत्रबाट काँग्रेसकै उम्मेदवार दिवान सिह विष्टसंग झिनो मतले हारेकी थिईन् ।
प्युठानमा वाम गठनबन्धनबाट प्रतिनिधी सभा सदस्यमा निर्वाचित दुर्गा पौडेलले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी काँग्रेसका प्रा. डा गोबिन्द राज पोखरेललाई १६ हजार २२८को मतान्तरले निर्वाचित भएकी छिन् । पौडेलले ४७ हजार ५१४ पोखरेलले ३१ हजार २८६ मत पाएका थिए । पुर्वी नेपालको झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २बाट प्रतिनिधी सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका वामका पवित्रा निरौला खरेलले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी काँग्रेसका उद्धव थापालाई १३ हजार ७६७ मतान्तरले हराउदै निर्वाचित भएका छन् । खरेलले ४५ हजार ८१७ मत र थापाले ३२ हजार ५० मत ल्याएका थिए ।
रुकुम पूर्व क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार कमला रोकाले ६ हजार २८ मतान्तरले निर्वाचित भएका छन् । रोकाले १० हजार ४३४ मत ल्याईन् भने उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हरिशंकर घर्तीले ४ हजार ४६ मत ल्याएका थिए । ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पम्फा भुसाल आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी भन्दा १ हजार ७०७ मतान्तरले निर्वाचित भएका छन् । भुसालले २४ हजार ३७ मत ल्याइन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका मदन अमात्यले २२ हजार ३ २९ मत ल्याएका थिए ।
यसरी देशभरका प्रतिनिधी सभा सदस्यमा निर्वाचित महिला उम्मेदवार मध्ये बिनाले सर्वाधिक मत प्राप्त गर्ने पहिलो महिला भएकी छिन् । बिना मगर प्रतिनिधी सभामा निर्वाचित भएपछि निर्वाचनका बेला जनता संग गरेका बाचा पुरा गर्ने र यस क्षेत्रको आर्थिक विकास र सम्बृद्धि गर्ने बताएकी छिन् । उनी सर्वाधिक मतान्तरले निर्वाचित भएपछि यहाँका जनताले बिनालाई सफल महिलाका रुपमा हेर्न थालेका छन् । उनलाई हजारौँले बधाई दिईरहेका छन् ।
यस्तै प्रदेश तर्फ निर्वाचित महिला मध्ये पनि बिनाले नै सबैभन्दा बढि मत र मतान्तरले निर्वाचित भएकी छिन् । प्रदेशसभा सदस्यमा मकवानपुर क्षेत्र नं १ को (क) बाट वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार, माओवादी केन्द्रकी कुमारी मोक्तानले लोकतान्त्रिक गठबन्धनका यतिराज सापकोटा भन्दा १२ हजार ९ सय ९६ मत बढी ल्याई पराजित गरिन् । मोक्तानले २७ हजार १ सय ३२ मत ल्याइन् भने सापकोटाले १४ हजार १ सय ३६ मत ल्याएका थिए ।सर्लाही क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट वाम गठबन्धनकी बेची लुङगेलीले नेपाली कांग्रेका शेष साह दुल्लाहलाई पराजित गरिन् । उनले ६ हजार १ सय ६६ मतअन्तरले दुल्लाहलाई पराजित गरेकी हुन् । लुङगेलीले १५ हजार ३ सय ६३ मत ल्याएकी छन् भने दुल्लाहले ९ हजार १ सय ९७ मत प्राप्त गरेका थिए ।
उदयपुर क्षेत्र नं.२ (ख) प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार कला घलेले निकटतम् प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका रामकुमार खत्रीलाई पराजित गरिन् । उनी खत्री भन्दा ४ हजार ४ सय ८४ मत बढी ल्याई विजयी भइन् । घलेले १३ हजार ४ सय ५९ मत ल्याएर विजयी भएकी हुन् । खत्रीले ८ हजार ९ सय ७६ मत प्राप्त गरेका थिए ।बाँके क्षेत्र नं १ प्रदेशसभा (क) बाट बाम गठबन्धनकी साझा उम्मेदवार माओवादी केन्द्रकी नेता कृष्णा केसी (नमुना)ले निकतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका शरद चन्द्र बर्मालाई ३ हजार १ सय ९६ मत अन्तरले पछि पार्दै विजयी भइन् । केसीले १३ हजार ४ सय ३६ मत प्राप्त गरिन् भने काँग्रेसका बर्माले १० हजार २सय४० मत प्राप्त गरेका थिए । म्याग्दीको प्रदेशसभा ‘ख’ बाट वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार नेकपा एमालेकी नरदेवी पुन मगरले २ हजार ८ सय ७८ मत बढी ल्याई आफ्ना निकटतम् प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका अमलाल फगामीलाई पराजित गरिन् । मगरले १० हजार ८ सय ६८ मत ल्याईन् भने फगामीले ७ हजार ९ सय ९० मत ल्याएका थिए । बझाङ प्रदेशसभा ‘ख’ बाट वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार माओवादी केन्द्रकी देवकी मल्ल थापा २ हजार ५ सय १ मत अन्तरले विजयी भईन् । मल्लले १६ हजार ७ सय ४३ मत ल्याएकी छिन् भने उनका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार नरेश बहादुर सिंहले १४ हजार २ सय ४२ मत ल्याए ।
यस्तै काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० ‘ख’ बाट वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार एमालेकी रमा आलेमगरले प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका उम्मेदवार धर्मनन्द्र श्रेष्ठलाई २ हजार ८ सय ३२ मत बढी ल्याएर पराजित गरिन् । रमाले ९ हजार ९ सय ३ मत ल्याएकी छिन् भने श्रेष्ठले ७ हजार १७ मत ल्याएका थिए ।ललितपुर क्षेत्र नं. १ को (क) को प्रदेशसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार माओवादी केन्द्रकी लालकुमारी पुनले कांग्रेसका ऋषिराम घिमिरेलाई २ हजार ७ सय ३६ मत अन्तरले पराजित गरिन् । पुनले १२ हजार ८ सय ४१ मत ल्याएर विजयी भइन् भने घिमिरेले १० हजार १ सय ५ मत प्राप्त गरी पराजित भए ।तनहुँ क्षेत्र नं २ को ‘क’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा आशा कोइरालाले पाँच मतको अन्तरले कांग्रेसका उम्मेदवार प्रदिप पौडेललाई पराजित गरिन् ।कोइरालाले १६ हजार ६ सय ४६ मत प्राप्त गरी विजयी भईन् भने पौडेलले १६ हजार ६ सय ४१ मत पाएका छन् ।
यस्तै बारा क्षेत्र नम्बर ३ (क) बाट वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार माओवादी केन्द्रकी ज्वाला साह प्रदेशसभा सदस्यमा कांग्रेसका रामनन्द परसाद यादवलाई पराजित गर्दै विजयी भईन् । उनले १ हजार ६२४ मत अन्तरले यादवलाई पराजित गरेकी हुन् ।साह ११ हजार ७ सय ७१ मत प्राप्त गरिन् भने गरिन् भने यादवले १० हजार १ सय ४७ मत प्राप्त गरे । महोत्तरी क्षेत्र नम्बर १ को (क) बाट प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार नेकपा एमालेकी शारदा थापाले १ हजार २ सय ५१ मत बढी ल्याई नेपाली कांग्रेसका प्रल्हाद कुमार क्षेत्रीलाई पराजित गरिन् । उनले १० हजार २ सय ८२ मत पाएकी छन् भने क्षेत्रीले ९ हजार ३१ मत पाए ।प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ विभिन्न राजनीतिक दलबाट ३६ महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए । जसमा प्रतिनिधि सभातर्फ १६ र प्रतिनिधिसभाका लागि वाम गठबन्धनबाट ३ महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।
प्रदेशसभातर्फ २० जना महिला मध्ये ६ महिलाले ठूला दलबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । यस्तै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ १ सय २६ र प्रदेशतर्फ २ सय ९ महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए । यसरी महिला उम्मेदवारले पुरुष उम्मेदवारलाई पछि पार्दै सबैभन्दा बढि र सर्वाधिक मतान्तरले जित्नु नेपालका महिला समेत राजनीतिमा सक्षम हुँदै गएको संकेत गरेको छ ।